यौन तथा प्रजनन् अधिकार - विचार - नारी
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा थुप्रै सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएका छन् । एक दशकअघि मात्र असुरक्षित गर्भपतनका कारण हजारौं महिलाले ज्यान गुमाउने अवस्था थियो । गर्भपतनसम्बन्धी कानुनको अभावमा अधिकांश महिला लुकिछिपी असुरक्षित गर्भपतन गराउँथे । सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी कानुन बनेर सन् २००४ देखि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु भएपछि नेपालमा अहिले असुरक्षित गर्भपतनका कारण हुने महिलाको मृत्युदर कम भएको छ । अहिले महिलाले चाहेको अवस्थामा कसैको सहमति नै नलिई १२ हप्तासम्मको अनिच्छित गर्भ पतन गराउन सक्छन् । हाडनाता करणी वा बलात्कारबाट बसेको १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसका अतिरिक्त गर्भको शिशु अपाङ्ग, विकलाङ्ग जन्मिने अवस्था भए जतिसुकै बेला पनि विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्शमा गर्भपतन गराउन पाइन्छ ।
एक दशकअघि मात्र पनि प्रसूति सेवा (बच्चा जन्माउन) लिन अस्पताल जाने महिलाको संख्या न्यून हुन्थ्यो । धनीमानी तथा जाने बुझेकाले मात्र बच्चा जन्माउन अस्पताल वा बर्थिङ सेन्टर जाने चलन थियो, तर सरकारले प्रसूति सेवा नि:शुल्क गरेपछि प्रसूति सेवा लिन स्वास्थ्य संस्था पुग्ने महिलाहरूको संख्या बढ्दो छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांक (०७१/७२) अनुसार ४८ प्रतिशत महिलाले स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सन्तान जन्माउने गरेका छन् । यो संख्या पाँच वर्ष पहिले ३० प्रतिशत थियो जुन बर्सेनि बढिरहेको छ ।
सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा नि:शुल्क गर्नुका साथै प्रसूति गराउन अस्पताल आउने महिलालाई शिशु जन्मिएपछि यातायत खर्च बापत हिमाली क्षेत्रमा १५ सय, पहाडी क्षेत्रमा १ हजार रुपैयाँ तथा तराईमा ५ सय रुपैयाँ दिन थालेपछि यसले महिलालाई स्वास्थ्य संस्थामै गएर शिशु जन्माउन अभिप्रेरित गरेको छ । सरकारले प्रसूति सेवा नि:शुल्क गरेपछि बाल मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर पनि घटेको छ । अहिले सुत्केरी यातायात भत्ता दोब्बर बनाइएको छ ।
ग्रामीण भेगका महिलाको प्रमुख स्वास्थ्य समस्यामध्ये पाठेघर खस्नु पनि एक हो । यस विषयमा सही जानकारी नहुने भएकाले र उपचार गराउँदा महँगो हुने भयले अधिकांश ग्रामीण महिला रोग लुकाएर बस्थे । सरकारले विगत ५ वर्षदेखि यो समस्या बढी भएका ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ टोली पठाएर पाठेघर खसेका महिलाको नि:शुल्क शल्यक्रिया गर्न थालेपछि अहिले पाठेघर खसेको उपचार गराउन नपाएर बसेका हजारौं महिलाले राहत महसुस गरेका छन् ।
परिवार नियोजन सेवा लिन चाहनेहरूको संख्या बढ्दो छ । युवायुवती आधुनिक विकल्पको खोजीमा छन् । उनीहरू युवामैत्री सेवा लिन चाहन्छन् । परिवार नियोजनका क्षेत्रमा अग्रणी नेपाल परिवार नियोजन संघले यो क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । संघले आफ्ना ३७ वटा शाखामार्फत परिवार नियोजनसम्बन्धी प्रतिरोधात्मक एवं उपचारात्मक सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । सरकारले पनि देशका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क परिवार नियोजनका साधन तथा सेवा पुर्‍याइरहेको दाबी गरेको छ । युवा–युवतीमैत्री सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने काम पनि सरकारले अघि बढाइरहेको छ ।
एकातिर यौन तथा प्रजनन अधिकारलाई महिलाको मौलिक हकका रूपमा ग्रहण गर्ने तर अर्कातिर ती सेवा नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्दा समस्या देखिएको छ । त्यसैले अब महिलाको यौन तथा प्रजनन अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न गर्भपतन सेवालाई नि:शुल्क गर्नुपर्छ ।
सरकारले प्रसूति सेवा नि:शुल्क गरे पनि त्यसअनुसार अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिङ होम वा बर्थिड सेन्टरको सेवा–सुविधा एवं गुणस्तर विकास गर्न नसक्दा सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्तरीय सेवा प्राप्त हुन सक्ने अवस्था छैन । अहिले पनि प्रसूति व्यथाकै कारण कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका थुप्रै महिलाले ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन । सरकारले परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई अहिले पनि जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति दिन सकेको छैन ।
सबै महिला कर्मचारीलाई समान रूपमा कम्तीमा तीन महिना प्रसूति बिदा दिनुपर्छ । परिवार नियोजन सेवा युवामैत्री हुनुपर्छ । सबै स्वास्थ्य संस्थामा सबै किसिमका साधन एवं सेवा नि:शुल्क उपलब्ध हुनुपर्छ । सरकारले परिवार नियोजन संघसँग सहकार्य गरी यो कार्यक्रमलाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्छ । परिवार नियोजनलाई जनसंख्या घटाउने साधनका रूपमा मात्र नलिएर व्यवस्थित परिवार निर्माणको आधारस्तम्भ बनाउनुपर्छ ।
फाल्गुन २७, २०७६ - संविधानले दिएको अधिकार महिलाले उपभोग गर्नुपर्छ
विश्व महिला सम्मेलन र समानताको सवाल चैत्र १२, २०७६
पुस्ता समानता: आजको आवश्यकता चैत्र ६, २०७६
धूमधाम विवाह कि जीवन ? फाल्गुन १८, २०७६
कहालीलाग्दो छाउपडी माघ २, २०७६
निर्मलाले न्याय नपाउने नै हुन् त ? पुस ३, २०७६